यस्तो रह्यो काँग्रेसको एक वर्ष : विवादै विवादका चाङ | सु-सुचित नेपालको चित्र
यस्तो रह्यो काँग्रेसको एक वर्ष : विवादै विवादका चाङ
आगामी आइतबारबाट २०७६ साल सुरु हुँदैछ । २०७५ साल सुरु हुनुअगावै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत ग्रहण गरेको नेपाली काँग्रेसले एक वर्षको अवधिमा के कस्ता काम गर्यो ? काँग्रेसको एकवर्षे कार्यअवधिका कामकारवाहीको समीक्षा गर्न प्रयास गरिएको छ ।
कसैले बाटो देखाउला कि भन्ने आश गरेर बस्नु र जसले जता बाटो देखायो उतै कुद्नुपरिरहेको काँग्रेसको अहिलेको तीतो यथार्थ हो । काँग्रेसको अबको राजनीतिको मुद्दा के हो रु राष्ट्रिय राजनीतिको उसको लाइन के हो रु भन्ने कुरामा नागरिक मात्रै होइनन् काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरु पनि अन्यौलमा छन् । चुनावमा एजेन्डाविहीन देखिएको काँग्रेसले यो एक वर्ष एजेन्डाबिनै बितायो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो अवस्था ओली नेतृत्वको सरकारका लागि सुखद् हुन पुगेको छ ।
तर काँग्रेसलाई समय सुहाउँदो पार्टी बनाउँछौँ भन्ने समूहले भागबण्डाकै आसमा बस्यो । सरकारको हकमा जसरी काँग्रेस भागबण्डामा लिप्त भयो, त्यसैगरी काँग्रेसको विपक्षी कित्ता पनि भागबण्डामै लिप्त हुन पुगेको देखिन्छ । काँग्रेसमा भागबण्डा मिल्दा चाट्ने नमिल्दा काट्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।
अब काँग्रेसको एक वर्षे आन्तरिक गतिविधिसँग देखिएका विवाद:
काँग्रेसले ०७४ चैत ९ गतेदेखि ०७५ वैशाख १६ गतेसम्म प्रदेश एवम् सङ्घीय तहको निर्वाचन भोगेको लज्जास्पद पराजयको विषयमा समीक्षामा गरेको थियो । निर्वाचन समीक्षाको प्रयोजनका लागि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टी पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने र निर्णयमा के लेख्ने भन्ने विवाद निरुपणमै समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
पार्टीको अस्वाभाविक पराजयपछि विधान विपरीतका संसदीय समिति, कार्यसम्पादन समिति, सभापतिको कार्यशैली जिम्मेवार भएको भन्दै सभापतिले नै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने संस्थापन इतर पक्षको तर्क थियो । तर निर्णयमा भने हारको प्रमुख कारण तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको गठबन्धनलाई लिइयो । यस्तै हारको जिम्मा केन्द्रीय समितिमाथि थुपारिएको थियो ।
१ : पदाधिकारी मनोनयन
२ : जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेला
३ : विधानविपरीत जिल्ला सभापतिहरुको ककनी भेला
पार्टी परिमार्जन तथा संशोधन विधानमा आफ्ना माग घुसाउनका लागि दबाब स्वरूप मङ्सिर १२ गते नुवाकोटको ककनीमा जिल्ला सभापतिहरु भेला भएका थिए । भेलाले भेलाले पार्टीको विधान मस्यौदाबारे २४ र समसामयिक राजनीतिका विषयमा १४ वटा गरी ३८ बुँदे घोषणपत्र जारी गरेको थियो ।
४ : गच्छदारको व्यवस्थापन
सभापति देउवाले कात्तिक २० गते संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई पार्टीको उपसभापति नियुक्त गरेका थिए । २० गते पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गच्छदारलाई उपसभापतिमा नियुक्त गरेको थियो । ०७४ असोज २९ गते उनले आफ्नो नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी काँग्रेसमा मिसाएका थिए ।
विवाद ५ स्संस्थापन पक्षले गच्छदारको नियुक्तिको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको थियो । काँग्रेस विधानअनुसार एक जना उपसभापति रहने व्यवस्था छ । जसमा निधि पहिले नै उपसभापति थिए । उपसभापति हुन निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्छ प्रावधान पनि छ ।
५ : महासमिति बैठक
काँग्रेसले लामो समयपछि गत मङ्सिर २८ गतेलाई महासमिति बैठक बोलाएको थियो । पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशनबाहेक प्रत्येक एक वर्षमा महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ । तर देउवाले आफू पार्टी सभापति भएको ३४ महिनापछि महासमिति बैठक बोलाएका थिए ।
उक्त बैठक पार्टीको विधान संशोधन, राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको थियो । साथै पार्टी पराजयको समक्षी पनि गरिएको थियो । ४ दिनका लागि बोलाइएको बैठक १० दिनसम्म चलेको थियो । अन्ततः पुस ८ गते सबै प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा परित भएका थिए । जसमा १४ पार्टी पदाधिकारीसहित १६७ केन्द्रीय कार्यसमिति रहने निर्णय भएको थियो ।
यता महासमितिको समापन समारोहमा जिल्ला सभापतिको माग केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सम्बोधन गर्ने सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले मौखिक प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेका थिए ।
महासमिति बैठक पनि विवाद रहित हुन सकेन । प्रमुख नेताहरुले पार्टी विधानलाई आफू अनकुल अन्तिम रूप दिन निकै हानथाप गरेका थिए । ४ दिनका लागि बोलाइएको बैठक पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सङ्ख्या कति राख्ने भन्नेमा मतभेद हुँदा १० दिन लम्बिएको थियो ।
त्योबीचमा सहमति हुने र उल्टिने कार्यसमेत भए । जसको असर महासमिति सदस्यमाथि पर्यो । बैठक स्थालमै हात हालाहालको स्थितिसमेत सिर्जना भएको थियो ।
६. केन्द्रीय समितिबाट विधान पारित
७ : केही समिति गठन
पार्टीको चैत ४ र ५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुशासन समिति, निर्वाचन समिति, पार्टी निमावली समिति गठन गरेको छ । यो कार्यमा भने गठनपछि विवाद देखिएन । तर गठनअघि भने बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमते आएको थियो ।
जसकारण उक्त समिति गठनको प्रयोजनका लागि चैत १४ गते बालाइएको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
८ : केही जिल्ला सभापतिको ठमेल भेला
९ : कार्यसम्पादन समिति गठनको प्रयास
केही दिन यता काँग्रेसको आन्तरिक राजनीति निकै गर्मिएको छ । जसको कारण हो कार्यसम्पादन समिति गठनको प्रयास । सभापति देउवाले गत शुक्रबार ९चैत २२ गते० आफ्नो निवासमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच ६०–४० को अनुपातमा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
यता १३औँ महाधिवेशनदेखि पार्टीको तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका सिटौला यता न उताका भए । ६०–४० मा सिटौला पक्ष कता भन्नेमा नेताहरु विवादित बने । जसको कारण थियो– ९० जना केन्द्रीय सदस्यबाट २९ जना छनोट गर्नु र पार्टीमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका कृष्णप्रसाद सिटौलाले भाग नपाउनु ।